Ciidamad Tanadland Oo Maalintii Sadexaad Ka Go’doomiyey Waqooyiga Xaafadda Israac Magaalada Inteeda Kale – Codka Qaranka Tanadland
Ciidamad Tanadland Oo Maalintii Sadexaad Ka Go’doomiyey Waqooyiga Xaafadda Israac Magaalada Inteeda Kale
Ciidamad Tanadland Oo Maalintii Sadexaad Ka Go'doomiyey Waqooyiga Xaafadda Israac Magaalada Inteeda Kale Iyo Xiisad Ka Soo Cusboonaatay Galbeedka Magaalada Gaalkacyo.
Labadii todobaad ee ugu danbeeyey waxaa ka soo cusboonaaday xiisad galbeedka magaalada Gaalkacyo, qaasatan aagii sanadkii hore lagu dagaalamay ee galbeedka xaafadda Garsoor. Xiisaddaan cusub ayaa waxaa u sabab ah beesha sacad oo rabta inay ku soo durugto degaanka ku hareeraysan wadada dhanka xamar aada, dhul kaas oo ah dhul ay leeyihiin dadka reer Tanadland kaas oo dhanka koontaroolka koonfureed uga beegan dhanka Xamar. Sidaad ogsoontihiin xataa waxaa jirtey in beesha Sacad maleeshiyadeedu ay soo degeen wadada Xamar aada habeenkii ay taariikhdu ahayd (24/12/2016).Oo ay halkaas isbaaro dhigteen mooryaanta beesha Sacad. Markii ciidamada reer Tanadland ee fadhiya koontaroolka koonfureed ay ogaadeena subaxdii ayey weerareen oo mooryaantii beesha Sacad ay kala cayriyeen, 3 nin na ay halkaas uga dileen. http://tanadland.com/ciidamada-tanadland-oo-weeraray-mooryaanta-beesha-sacad-3-ninna-ka-dilay/
Intaas waxaa xigey in nin beesha (Xirsi Muumin) ah si dooxatayn ah dhanka miyiga ay ugu dileen Sacad. Nin kaas oo beesha (Muumin Aadan) ay ugu aareen nin Sacad ah oo ay miyiga ku dileen. Waxaa kaloo jirta in labadii todobaad ee ugu danbeeyey ay labo jeer ciidamada Tanadland ay weerareen maleeshiyada beesha Sacad oo fariisintoodu ay tahay waqooyiga xaafadda Baraxlay. Weerarkii hore wuxuu dhacay habeenkii ay taariikhdu ahayd (29/04/2017), waxaana ciidamada Tanadland ay weerar mir ah ku qaadeen meel ay beesha Sacad dhisme aas-aas kiisa ay ka dhiseen habeenkaas habeenkii ka horeeyey. Laakiin nasiibdaro, nimankii la filayey inay dhismaha ay habeenkii hore aas-aaskiisa bilaabeen inay halkii ka sii wadaan maysan imaan habeen kaas. Markaas ayey ciidamada Tanadland ay aas-aaskii bur-buriyeen, oo hadana ay markaas tacshiirad xoog leh ay ku fureen xaafadda Baraxley. Ciidamada geesiyiinta ah ee Tanadland waxay kaloo ay halkaas ku bur-buriyeen haan booyad ah oo biyo ay ku jiraan. Ujeedada halkaas loo keenayna ay ahayd in dhismaha aas-aaskiisa la bur-buriyey dhismihiisa loo isticmaalo.
Todobaad kaan aynu ku jiro bilowgiisii taariikhdu markii ay ahayd (01/05/2017) ayaa aagii beesha Sacad ay damacday inay dhisme ka dhisaan oo todobaadkii hore laga bur-buriyey, ayaa waxaa yimid maleeshiyo beesha Sacad ah oo duulaan ah. Nimankaas duulaanka ah markii la arkay in xaafadda baraxley ay ka soo dhaqaaqeen oo ay ku socdaan meeshii dhismaha bilowga ah laga bur-buriyey, ayaa ciidamad Tanadland ee fariisinkoodu uu yahay galbeedka Xaafadda Garsoor ay tacshiirad ku bilaabeen. Liif-saar kaas ciidamada reer Tanadland waxay rumaysanyihiin inay beesha Sacad uga dhinteen rag xayn ah. Balse nin u hadlay beesha Sacad oo magiciisa lagu sheegay (Maxamuud Cilmi Gulaafe), isla markaasna waraysi siiyey warbaahinta beeshiisa wuxuu ku waramay hadal dadka reer Tanadland ay aad ula yaabeen. Run ahaantiina dad badani ay u fasirteen in beesha Sacad aysan badideedu raali ka ahayn kooxda mooryaanta ah oo doonaya inay labada beelood oo deriska ah ay colaad ka dhex huriyaan. Hadalka shacabka reer Tanadland ay aadka ugu bogeen oo u (GS. Maxamuud Cilmi Gulaafe) uu warbaahinta ka sheegay waxa uu ahaa in beesha Habar-majeerteen ay labo jeer oo is xiga dagaal gardaro ah ay ku soo qaadeen beesha Sacad.
Weerarkii ugu danbeeyey oo dhacay taariikdu markii ay ahayd (01/05/2017) na ay wiilal banooni cayaarahaya iyo shacab daawanahaya ay xabadeeyeen. Halkaasna wiil wiilashii banooniga cayaarayey wiil ka mid ah lagu diley. Dadkii daawadeyaasha ahaana 2 gabdhood oo ka mid ah ayaa beesha Sacad laga dhaawacay. Hadalka afhayeenka beesha Sacad beelaha (Cismaan Yuusuf) iyo (Maalismoge) waxay u fasirteen in loola jeedo in looga raaligeliyo, daandaansiga ka fiirsasho la’aanta ah oo beesha Sacad ay dhawr goor sameeyeen kuna hoogeen. Tan iyo duulaankii gardarada ahaa ee beesha Sacad ay ku soo qaaday dooxada galbeed ee xaafadda Garsoor dabayaaqadii sanadkii 2016-ka.
Cabsida Beesha Habar-majeerteen Ee U Xasuuqa Joogtada Ahi Ku Socdo Iyo Sida Ay Uga Naxday Hadalka Beesha Sacad :-
Sidaad ogsoontihiin beesha Sacad maalinkii shalay ahaa waxay yeelatay hogaamiye cusub, waxayna hogaamiye u doorteen ganacsade (Axmed Ducaale Geelle “Xaaf”). Ganacsade “Xaaf” na waa nin beesha Habar-majeerteen ay sas ka qabaan oo cabsi weyn ay ka qabaan. Tusaale ahaan Magaalada Gaalkacyo nabad buuxda ayaa ka jirta oo magaaladu waa magaalo nabadeed hada, laakiin taas macnaheedu maaha in xasuuqii iyo ugaarsigii joogtada ahaa ee beesha Dhebayaco bawdyo-kuus lagu hayey inuu joogsadey. Todobaadkii ina dhaafay oo keliya waxaa laga laayey tobaneeyo nin oo u ku jiro nin nabaddoon ah. Hadana xasuuqa joogtada ah oo ragooda lagu laynayo waxaa ugu darmay hada waxaa soo food saartay cabsi tii ugu darayd. Oo xataa waxay isku aamini waayeen garoonkii diyaaradaha. Oo waxay aaminsanyihiin in marba hadii suuqii ay martida ku ahaayeen ee xerada Dayax keligood lagu shirqoolay oo lagu xasuuqay in goobta xigta ee lagu xasuuqidoonaa ay garoonka diyaaradaha tahay. Waana arinta u sababta ah in xaaraantii isbaarada Bosaso taala dadka reer Tanadland looga dhacay oo dhan, inay yiraahdaan Habar-majeerteen garoon cusub oo amaan ah baanu ku dhisaynaa.
Mideeda kale, beesha Habar-majeerteen iyo reer Tanadland maaha dad sir kal qarsankara waana ay ogsoonyihiin in caruur banooni cayaaraysa oo la weeraray inaysan jirin. Bal iska daah caruur waxyeelo loo geystay’e. Hadalka afhayeenka beesha Sacad na uu yahay hadal siyaasadaysan oo loogu goodinayo beesha Habar-majeerteen. Sababta ugu weyn ee ay beesha Habar-majeerteen saska uga qabto hogaamiyaha cusub ee beesha Sacad na waxa weeye labo arimood. 1) Waxay ogyihiin xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya (Axmed Ducaale Geelle “Xaaf” iyo beelaha reer Tanadland ee gobalka mudug dega. 2) Teeda Kale, “Xaaf” waa ninka ugu xog ogaalsan siyaasiyiinta beesha Sacad sida loo wiiqay awooda beesha Habar-majeerteen oo ay naflacaariga u tahay. Hadalka afhayeenka beesha Sacad uu idaacadaha ka sheegayna, beesha Habar-majeerteen waxay u fasiranayaan hadal ka soofuley (Axmed Ducaale Geelle “Xaaf”).
Cabsida xad-dhaafka ah ee haysa beesha Habar-majeerteen waxaa cadayn u ah fashilkii ku dhacay websaydyada beesha Habar-majeerteen maalintii shalay ahayd oo ay taariikhdu ahayd (03/05/2017). Maalinkii shaly ahaa dadka reer Tanadland waxay ogaadeen in isku hal meel laga hago websaydyada ay wax ku qoraan ciyaalka beesha Habar-majeerteen. Shalay waxaa baraha bulshadu ay ku kulanto lagu arkay dad reer Tanadland ah oo leh, “War bal noo warama waxaanu maqalnay in nimankii Sacad ahaa ay duqeeyeen waqooyiga xaafadda Israac oo ay 4 qof oo dhebayaco ah ay dhaawaceen, gurina ay ka dumiyeen’e?. Markaas ayaa qadka waxaa soo galay dad badan oo reer Tanadland ah oo magaalada Gaalkacyo ku sugan, qaarkoodna ay deganyihiin galbeedka xaafadda Israac sidii wax u dheceena iyagu indhahooda ku soo arkay. Markii la wada ogaadadey in guri dhebayaco ay leedahay oo ku yaala waqooyiga xaafadda Israac inay xabad wiifto ahi ku dhacday, oo aysan jirin habayaraatee wax dhaawac ah oo xabaddaas guriga ku dhacday ay geysatey. Ayaa dad badan waxaa layaab ku noqotay waxa kalifay in warbaahinta beesha Habar-majeerteen iyo midiidinka ay ku adeegtaan, inay been aan sal lahayn ay si wadajir ah u faafiyaan. Arintaas markii laysla meeldhigay oo laysku raacay in websaydyada beesha habar-majeerteen hal meel laga hago, oo u beentaas faray inay faafiyaan horjoogaha beeshooda calaan C/weli. Goortaas ayaa dad badan oo reer Tanadland ahi waxay Ogaadeen in mulkiilaha websaydka (Raxanreeb.com) in uu yahay calooshi u shaqayste u adeega cadowga tolkiis, oo sandareerto lagu siiyo faafinta beenta ay rabaan inay faafiyaan cadowga tolkiis.
Xiisadda Ka Dhex Aloosan Beesha (Muumin Aadan) Iyo Habar-majeerteen :-
Mudo sadex maalmood ah waqooyiga xaafadda Israac oo ay u badantahay beesha Habar-majeerteen waxaa beesha (Muumin Aadan) ay ka godoomisey magaalada gaalkacyo inteeda kale, kedib markii ay geeyeen ciidan xoog leh wadada dheer ee laamiga ah iyo jidad badan oo xaafadaha dhex mara. Ciidamada beesha (Muumin Aadan) ayaa talis ciidamada laga hago waxay ka dhigteen dhisme laamiga saaran oo ku dhow bangiga dhexe. Xiisaddaan oo ah xiisad weyn oo laga yaabo in uu dagaal xun oo lagu kalabaxo uu ka dhasho. Ayaa intii ay taagneyd warbaahinta beesha Habar-majeerteen ay ku dhiciwaayeen inay ka hadlaan, cabsi ay ka qabaan in dadyow kale ay ogaadaan darteed. Ayaan dhexdeer ah waxaa miyiga gobalka mudug lagu diley nin ilma-adeer ay yihiin horjoogaha beesha Habar-majeerteen C/weli calaan iyo nin kale oo isla beesha Habar-majeerteen ah. Labadaas nin na waxaa qaarajiyey oo gaarigii ay wateen baas shabaqa uga dhigay nin kale oo dhebayaco ah. Balse Dhebayaco ilayn wax ka naf-jecel’e ninkii dhebayaco oo labada nin oo reer tolkiis ah laayey, markii la qabtay wuxuu ku andacoodey in nin ay xidid yihiin oo ay isla socdeen ay nimanka baas ku wadafureen. Markay intaasi dhacday ayaa naagihii futada buur-buuraa ee habar-majeerteen oo weligeedba marka aanu ragooda bareero u layno deero aysan deero u hardiyijirin. Waxay keeneen inay ninkii (Muumin Aadan) intay qafaasheen inay yiraahdaan isaga iyo ninka kalaba labadii nin oo ay wada dileen baanu ugu aaraynaa. Ninka cida (Muumin Aadan) oo agoontu ay qafaasheen ayaa beel ahaan wuxuu ka soo jeedaa lafta (Xirsi Muumin).
Beesha Habar-majeerteen oo sadexdii maalmood ee ugu danbeeyey ciidamada beesha (Muumin Aadan) ay caburiyeen, oo xataa ka baqay inay maleeshiyadooda keenaan jiida hore. Cabsi ay ka qabaan in arintaasi ay ka caraysiiso ciidamada beesha (Muumin Aadan) oo ay durba jiiraan. Isku soo wada duub oo maantay gelinkii danbe ayaa horjoogaha beesha Habar-majeerteen C/weli calaan iyo beeshiisu ay ku baryootameen, in hadii beesha (MA) ay ka dulqaado ciidamada ku hareeraysan waqooyiga xaafadda Israac inay nin kooda u soo deynayaan. Hadii taasi ay dhacdo ayaa beesha Habar-majeerteen oo hada iska dhaadhiciyey in labada nin ay raga dhintay wada dileen, ayaa waxaa qasab ku noqonaysa in ninka jifada reer Mahad oo ay hada jifadiisu rabto in isaga iyo ninka reer (Xirsi Muumin) oo aan denbiga lahayn la wada toogto. Inay aqbalaan in nin kooda oo keliya loo dilo labadii nin oo iyagoo gaarigooda ku mushaaxahaya sida kibirka ah loo laayey.
Beesha (Muumin Aadan) ee aan ka dhashay niman sal fudud maaha, haday xaajo ama hawl ay galaana si kasta oo ay duruufi uga hor timaado jeer ay hawshaas ka jibo gaaraan lagamayaabo inay ka joogsadaan. Waagii beesha Habar-majeerteen ay wadaadka beesha Raxanweyn oo martida noo ah, intay gurigiisa ka afduubteen ay magaalada banaan keeda ku soo dileen. Waad ogeydeen oo jifada reer Mahad oo falkaas geysatey ninkii ugu qiimaha badnaa ayaanu inta xafiiskiisa ugu tagnay aanu goor barqo ah dhafoorka ka tooganey oo aanu ugu aarnay. Maalintaas beesha Habar-majeerteen waxa ay wax talaabo ah u qaadiwaayeen sow maahayn goortu inay ahayd goor aanu quusinay. Sidaanu har iyo habeen aanu ragooda u layneyney. Dagaalkii labada maalmood oo 126 ka nin looga diley beesha Hartina wuxuu ka bilowday nin raxanweyn ah oo degmada Buurhakaba ka soo jeeda. Marka beesha (Muumin Aadan) oo aysan waxba la ahayn marka nin kooda la afduubay intay waqooyiga xaafadda Israac ay weeraraan, inay ka dhigaan xoogaaga agoonta ah oo ku haray wax ay laayaan iyo wax ay maxaabiis ahaan u qabsadaan. Marka maxaa ku kalifay maanta inay goodi iyo cagojugleyn inay wax ku raadiyaan.
Dad badan oo aan anigu ku jiro ayaa u arka, beesha (Muumin Aadan) sida ay wax ku raadinayso inay tahay si qaabdaran oo liidnimo ah. Sideedaba beesha Habar-majeerteen cubka haatan ku jira oo ay xamilila’yihiin maaha in laga neefiyo. Habar-majeerteen waa’in maalin walba la laayaa oo xasuuqa joogtada ahi uusan marna ka joogsan. Beesha Habar-majeerteen xataa sida horjoogahooda C/weli calaan haday isdhiibaan, oo ay idaacadaha ka yiraahdaan ” Xataa hadii aan amaan nala siin oo nalaga gar-daranyahay mar walba anagu nabad baanu u diyaar nahay maaha in xasuuqa laga daayo”. Sababta oo ay tahay Habar-majeerteen waa cayayaan, cayayaanna waxa keliya oo uu mudanyahay in la cidibtiro. Balse marka iyagu ay gacanqaadka bilaabaan oo sida hada dhacday ay qof naga mid ah ay wax yeeleeyaan waa’in laga faa’iideystaa oo si fiican loo cidibtiraa.
Gunta Habar-majeerteen Mindhaa Gawda Kama Deyno!!.